တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် စံချိန်တင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးရှိ ရေကြီးရေလျှံနေသော လမ်းမပေါ်တွင် လူအများဖြတ်သန်းသွားလာနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကျိန့်ကျိုး၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ကျိန့်ကျိုးမြို့တွင် စံချိန်တင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ၊ လမ်းခရီးနှောင့်နှေးမှုများနှင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးတွင် စံချိန်တင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ရေကြီးရေလျှံထိန်းချုပ်မှုနှင့် မိုးခေါင်ခြင်း လျော့ပါးရေးဌာနချုပ်က ဇူလိုင် ၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း၌ ရေလွှမ်းမိုးမှု အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဆင့်ကို အမြင့်ဆုံးသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးရှိ ရေကြီးရေလျှံနေသော လမ်းမပေါ်တွင် ပစ္စည်းပို့သူတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပြင်းထန်သော ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ကျိန့်ကျိုးမြို့ရှိ လမ်းသွားလမ်းလာများ နှောင့်နှေးမှုဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၈၀ ကျော် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရကြောင်းနှင့် လိုင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော် လမ်းလွှဲထားရကြောင်းနှင့် မြေအောက်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ယာယီဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးရှိ ရေကြီးရေလျှံနေသော လမ်းမပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး လမ်းဖြတ်ကူးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယင်းမြို့၏ အမှတ် ၅ လိုင်းရှိ မြေအောက်ဥမင်အတွင်း မိုးရေများ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မြေအောက်ရထားတစ်စီးဖြင့် လိုက်ပါသွားသော ခရီးသည်အရေအတွက်မည်မျှ ပိတ်မိနေသည်ကို မသိရသေးပေ။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးရှိ ရေကြီးရေလျှံနေသော လမ်းမပေါ်တွင် ကားတစ်စီး ရေနစ်မြုပ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်နေရာသို့ ဒေသခံခရိုင်ခွဲမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားများ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။မြေအောက်ရထားတွဲအတွင်းရှိ ရေအမြင့်မှာ ပြန်ကျနေပြီ ခရီးသည်များမှာလည်း ယာယီအားဖြင့် ဘေးကင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကျိန့်ကျိုးရှိ ရေကြီးရေလျှံနေသော လမ်းမပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထို့ပြင် ကျိန့်ကျိုးမြို့ရှိ လေဆိပ်သည်တွင်လည်း မြို့သို့ အဝင်၊ အထွက် လေကြောင်းခရီးစဉ် ၂၆၀ ပယ်ဖျက်ခဲ့ရကြောင်း၊ မြို့ပတ်ရထားအာဏာပိုင်များကလည်း ရထားအချို့အား ရပ်နားခြင်းနှင့် ဆိုင်းငံ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ယင်းမြို့ရှိ လူနေရပ်ကွက်များစွာ၌ ရေနှင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ZHENGZHOU, July 20 (Xinhua) — The central Chinese city of Zhengzhou has been lashed by record rainstorms, causing severe waterlogging, traffic disruptions, and power outages.
The severe waterlogging has led to the virtual paralysis of the city’s road traffic. Over 80 bus lines have been suspended, more than 100 temporarily detoured, and the subway service has also been temporarily suspended.
1-People wade throughawaterlogged road in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Xinhua/Zhu Xiang)
2-A courier wades throughawaterlogged road in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)
3-A man wades throughawaterlogged road in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)
4- Danger signs are installed onawaterlogged road in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)
5- A car is inundated by rainwater in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)
6-Vehicles run onawaterlogged road in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)
7-A car is inundated by rainwater in Zhengzhou, capital of central China’s Henan Province, July 20, 2021. (Xinhua/Zhu Xiang)